Isitudiyo se "Havana encinci" kwiDowntown Chico
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguChris
Ukujika kwesakhiwo senkulungwane kumbindi wedolophu iChico, iCa ibonakalisa igumbi eliphezulu lestudiyo elinebhedi elungelelaniswe ngokupheleleyo yeKumkanikazi.
Indawo yokupaka iyafumaneka ngexesha lokuhlala kwakho.
Indawo esembindini wedolophu, esi studio kuhambo lwemizuzu emibini ukuya kwemihlanu ukuya kwiindawo zokutyela, ubomi basebusuku kunye nokuthenga kunye neYunivesithi yaseChico State. I-Bidwell Park, iSierra Nevada Brewery, isibhedlele sase-Enloe kunye nokunye kukuhamba ngemoto imizuzu nje. Iibhayisekile ezirentwayo ziyafumaneka kwibhloko enye ukuya kuphonononga isixeko kunye nenkqubo enkulu yepaki.
Esi situdiyo sisanda kulungiswa sibonisa imigangatho yompayina ehlaziyiweyo, iisilingi ezili-12, ubushushu obuncinci be-a/c kunye nomoya kunye nesilingi fan zizinto nje ezimbalwa eziluncedo kwesi studio siqaqambileyo.
Isitudiyo sifanelekile kuhambo olwandisiweyo lomsebenzi okanye ukubaleka ngempelaveki. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libandakanya isitovu segesi, iKeurig (kunye neepod) IFrench Press, icreamer, iswekile kunye neziqholo ezisisiseko. I-wifi enkulu, kunye nendawo yokusebenzela yokuphakama kwekhawuntari iyenza ibe yindawo efanelekileyo.
Lala kakuhle kwibhedi elungelelaniswe ngokupheleleyo yokumkanikazi enomandlalo wenkumbulo egcwele ibhedi esemgangathweni.
Ekubeni istudiyo sikwindawo esembindini wedolophu, kukho indawo yokupaka encomekayo. Kukho indawo yokupaka ezitalatweni ngokunjalo, kodwa qiniseka ukuba ufunda imiqondiso/iimitha ngexesha lokupaka emini.
Ipropathi ibekwe ngokufanelekileyo kumbindi wedolophu yaseChico.
I-Chico inikezela ngeziganeko ezahlukeneyo kunye nemisebenzi. Fumana ukutya okumnandi kwiindawo zokutyela zalapha ekhaya umgama nje oyi-2-5 yokuhamba, wonwabele ubomi bobusuku kunye nokuthenga kumashishini amancinci asekhaya.
Chitha usuku eBidwell Park apho unokukhwela ibhayisekile kwiindledlana, uqubhe eSycamore Pool okanye upakishe isidlo sasemini sepikiniki phantsi kwemithi.
Abazali abandwendwelayo baya kukuthanda ukuba kufutshane neCSU Chico. Ikhampasi ibamba iminyhadala emininzi kunye neendawo zembali ezifanele ukujongwa.
Qiniseka ukuba undwendwela iMarike yamaFama angoMgqibelo, isiseko sekhaya leNkampani eyaziwa ngokuba yiSierra Nevada Brewing Company kunye nezinye iindawo ezininzi zokuthengisa iwayini kunye neendawo zotywala.
Ndihlala kwindawo kwaye ndifumaneka ngokulula ngetekisi okanye umnxeba ukuba unemibuzo okanye ufuna nantoni na.